2019 Depond yakanyatsobudirira Yetiopia GMP kuongororwa
Kubva muna Gumiguru 21 kusvika 23, 2019, Hebei Depond akagamuchira kugamuchirwa uye kubvumidzwa kweBazi rezvekurima reEthiopia. Chikwata chekuongorora chakapfuura cheye-mazuva matatu ekuongororwa uye kuongororwa kwegwaro, uye vakatenda kuti Hebei Depond akasangana ne WHO-GMP manejimendi anodikanwa eSevhisi yeUrimi ...
Kubva muna Gumiguru 19 kusvika 20, 2019, mushonga wevanachiremba GMP boka renyika yeHebei vakaita ongororo yemakore mashanu yekurapa GMP kuDepond, Hebei Province, nekutora chikamu kwevatungamiriri vematunhu, emasipala nevedunhu uye nyanzvi. Pamusangano wekukwazisa, Mr. Ye Chao, gen ...
Musi waMay 18, 2019, iyo yechigumi neshanu (2019) China Animal Husbandry Expo uye 2019 China International Animal Husbandry Expo yakavhurwa muWuhan International Expo Center. Nechinangwa uye basa rekusimudzira rinotungamira kukura kweindasitiri, iyo Animal Husbandry Expo icharatidza nekusimudzira iyo yekupedzisira ...
Kubva munaKurume 15 kusvika 19, 2019, Hebei Depond akagamuchira kugamuchirwa uye kubvumidzwa kweBazi rezvekurima reSudan. Chikwata chekuongorora chakapfuura mazuva mana pamazuva ekuongorora uye kuongorora kwegwaro, uye vakatenda kuti Hebei Depond akasangana ne WHO-GMP manejimendi anodikanwa eSekuru rezvekurima ...
Dziya muna 2019 Russia Nyika Dzese Hwemurume Husbandry Expo
Musi waMay 28-30, 2019, nyika yose inochengeterwa mhuka Expo yaive kuMoscow, Russia, expo yakazobudirira kubatwa muMoscow krokus International Convention uye Exhibition Center. Kuratidzira kwacho kwakatora mazuva matatu. Vanopfuura mazana matatu ekuratidzira uye vanopfuura vatengi zviuru mazana matanhatu vaipinda kurudziro ...
Dziya muna 2019 Thailand VIV Asia - Bangkok
Kubva 1991, VIV Asia yakaitwa kamwe pamakore maviri ega ega. Parizvino, yaita 17 zvikamu. Chiratidziro ichi chinofukidza nguruve, huku, mombe, zvigadzirwa zvemumvura uye mamwe marudzi ezvipfuyo, matekinoroji uye masevhisi mune zvese zvikamu zveketani rese kubva ku "chikafu kusvika kuchikafu", inounganidza ...
Dziya muna 2019 Bangladesh Nyika Yese Mhuka Varume Husiku Expo
Musi waKurume 7-16, Hebei Depond akatora chikamu mu2009 Bangladesh International Animal Husbandry Expo, yakava kubudirira kukuru uye akawana yakawanda. Bangladesh ndeimwe yemaketi anonyanya kutengesa kunze kwenyika ezvekurima nezvipfuyo mumakore achangopfuura. Kuti uvandudze kukwikwidza kwekurima ...
Depond muVIV Nanjing 2018
Kubva munaGunyana 17 kusvika 19, VIV 2018 China International yakawedzera mhuka yekuratidzira mhuka yakaitwa muNanjing, guta rekare reChina. Sezvo mhepo ineyeyenzi yepasi rose yekudyara mhuka pamwe nenzvimbo yekuungana yevarapi, vanopfuura mazana mashanu emukati nekune dzimwe nyika varatidziri ...
2018 Shure muna 16 China China International Animal Husbandry Expo-Chongqing
Musi waMay 18, iyo 16, (2018) China Animal Husbandry Expo yakavhurwa zvikuru muChongqing International Expo Center. Kuratidzira kwacho kwese kwakatora mazuva matatu. Munzvimbo yekuratidzira ye200000 metres, zviuru zvemabhizimusi ane mukurumbira nekune dzimwe nyika akaungana pano. Munguva yeMhuka Husbandr ...
Denda rakabudirira kupfuura Libya GMP kuongororwa muna 2018
Kubva munaKurume 24 kusvika 26, 2018, Hebei Depond akagamuchira kuongororwa kweBazi rezvekurima reLibya. Chikwata chekuongorora chakapfuura icho-chemazuva-matatu chekuongorora uye kuongororwa kwegwaro, uye vakatenda kuti Hebei Depond anosangana nezvinodiwa neWHO-GMP, uye akapa kuongororwa kwakanyanya kwaHebei Depond. Izvi ...
2018 Kusvikira muna 14 Chikumi Kazakhstan yepasi rose yekurima yekuratidzira-Astana
Kazakhstan kuratidzira kwekurima kwepasirose kwakatangwa neTNT International Exhibition Kambani yeUnited States uye kwave kuchiitwa zvinobudirira kwenguva gumi nembiri. Pakuratidzwa kwegore rino, varatidziri vanobva kupasi rese vakaita michina yekurima, agrochemical uye mhuka mhuka ..
2017 Dziya muna 6th Pakistan yepasi rose Animal Husbandry Expo-Lahore
Kubva muna Nyamavhuvhu 24 kusvika 26, 2017, yegumi nenomwe Pakistan Pasi rose mhuka yezvekuratidzira yakaitwa muLahore. Hebei Depond akaita kuratidzika kunoshamisa kuPakichi huku Expo, panguva iyo yaibvunzurudzwa nenhau dzepano. Hebei Depond, sechipfuyo chiChinese chinotakura uye bhizinesi rezvemishonga, ...